Shacabka Gayiga - Dukaamada eGay
Wax kasta oo aad raadineyso si aad u muujisid sharaftaada waxaan ku haynaa eGay.shop. Waxaan ka iibinaa dusha sare ee alaabada kala duwan calanka sariiraha, Gacanta iwm ee Gay Princess, Gabadha Nacfiga ah ee Gaajada, Dharka Xushmaysan ee Gay kasta waxkasta oo dhacdooyinka aan ku hayno baaxaddaada.
Gabagabadii ugu horeysay ee Haweenka Gayka ah ayaa soo raacday sannad-guuradii ka soo wareegtay rabshadihii Stonewall bishii June 28th 1970 oo muujinaysa horumarka ka soo horjeedka Homophobia oo abuuraya xilliyo taariikhi ah. Waxaan inta badan maqlaa New York oo loo yaqaan 'dhulkii' ee Gays sababtoo ah meesha xoriyaddeedu si weyn u bilaabantay. Maanta Macaamilka Gay waa dabbaaldeg iyo waliba siyaasad xaddidan si loo abuuro wacyi galin ku saabsan hoos u dhaca, lakiin wali waa nasiib darro nacaybka nacaybka ah ee soo wajahday bulshadeenna iyadoo loo eegayo hoos u dhigidda nacaybka si loo yareeyo jiritaanka.
Haddii aad ka dhexjirto waddooyinka oo aad la wadaagto saaxiibadaa, ama si aamusnaan leh wax kuugu caawiya wax yar oo yar. 5% dhammaan iibka loo marayo eGay.shop waxaa lagu soo celiyaa hay'adaha samafalka ee Gay oo dhan si aan wax uga qabanno wax kasta oo aan awoodno. Laakiin naftaada Nabadgelyada Qosolka iwm, dharka, ama xusuusta oo aad ku faantid!
Naftaada iska daawee oo dukaameysi Ururinta Lacageed ee Gay.